Uma muuqato mid la mid ah, laakiin kheyraadka ay Adeegyada Shabakadda 'PlexScape Web Services' u diyaariyeen inay ku beddelaan isku-duwayaasha ayna ku muujiyaan Khariidadaha Google waa laylis xiiso leh oo lagu fahmayo sida nidaamyada isuduwidda ee gobollada kala duwan ee adduunku u shaqeeyaan. Tan awgeed, waddanka waxaa laga soo xulay guddiga muujiya Nidaamyada Isuduwidda ka dibna ...
Kaliya maanta waxaa la bilaabay nooca Isbaanishka ee bogga PlexScape, kaas oo marka laga reebo daabacaaddiisii ​​hore ee Griigga sidoo kale ku jirtay Ingiriis iyo Faransiis. Waxay noo muuqataa tilmaam muhiim ah, oo aan horay uga aragnay calaamado, tan iyo markii Plex.Earth oo ku jira in ka badan 10 luqadood ay horay ugu soo dartay Isbaanishka nooca 2.0.
Waqti ka hor waxaan ka hadlay Qalabka Plex.Earth ee loogu talagalay AutoCAD, oo ah qalab xiiso leh oo ka reebida soo dejinta, mosaicking images joreferenced iyo digitiintin sax ah, waxay kaloo ku sameyn kartaa dhowr howlood oo caadi ah aagga sahanka. Markan waxaan rabaa inaan tuso jiilka khadadka qaabdhismeedka Google Earth. Waxaa laga yaabaa xaqiiqda ah in ...
Microstation, oo laga soo qaatay nooca 8.9 (XM) wuxuu keenayaa hawlo taxane ah oo lagula macaamilayo Google Earth. Xaaladdan oo kale waxaan rabaa in aan tixraaco soo dejinta nooca seddex-geesoodka ah iyo muuqaalkiisa, wax la mid ah waxa AutoCAD Civil 3D sameeyo. Hawlahan waxaa lagu dhaqaajiyaa iyadoo la sameynayo: Qalabka> juqraafi ama haddii ay dhacdo Microstation ...